Asoosama Gabaabaa ___ DU’A DURA _ _ Kutaa 1ffaa=Wabii Xilaahuniin – Beekan Guluma Erena
Asoosama Gabaabaa ___ DU’A DURA _ _ Kutaa 1ffaa=Wabii Xilaahuniin	Beekan Erena
Asoosama June 6, 2016OROMO
……Yoon siin hin fuudhiin hafe akkuma muka qofaa dhaabbatee hafee waliin addaa addummaa hin qabu.
Yoon du’es du’akoof hammeenyi sima mataakeeti.Namni biraa qotee kan na awwaale hin jiru.
Ani….anumti siif jecha akkan ofdhabu yeroo dheeraa duubakootti darbe duran mugeen abjuun argeera.
Du’a of oolchuuf jaalalakee akkattin dhiisu hin qabu.
Kanumaaf jedheen tokko lama jedhee tarkaanfii fudhachaa ofirrattis fudhachiisa jira.Ani Jabeessaan abbumakoof hin dhalanne hin dhalanne ani du’ee badu malee ati kan isaanii hin taatu.
jabeessaan Mana jala taa’ee kophaa isaa taphachaa mataa ofirraa cira.
Ciniinsuu du’a dura godhamu ofkaltii duraa irra jira.Kan ciniinsuu malee dhalatu arraba dhundhuma meeqa ofkeessaa gadi yaasanii nama cabsuuf aggaamuudha.Garuu arrabaan miti uleefi qawweenuu goota cabsuu didee akka amoolee bishaan keessa taa’ee cophee dhumaa jiruu cophsan nufixu malee.
yaadni Siifan jabeessatti boba’aa firfirsee gubee bilcheeffataa jira.Jabeessaan garuu “ani gubadhe”jedhee hin beeku.gubachuu miti “natti bulluqe”jedhee hin beeku.
Siifanis jabeessaa jaallatteetti garuu dandeettii kaan ittiin of irraa dhorkitee kan jabeessaa qofa taatu hin qabdu.
Yaa biyye na nyaadhu kunoo siifaniin Osoon ilaaluu nyaachuuf na harkatti gomja’u.
Du’akoon awwaalakoon xumurama.
Jaalalli ishee anaaf dachee oromiyaati,dandeessuudha.Galaana abbayaa godhanii narraa hidhuuf deemu malee Abbayatu hidhama malee Siifaniin narraa hidhuu hin danda’an.Abbayatu hidha oolee dukkana limixiitti hafna malee siifaniin kaasaa hin kennu.
Boor jaamnaa har’a hin dunuunfatan.Har’a siifan magaalaa Amboo naannoo ani jiru jirti,walargina.
jabeessaa:naannoo kam jirta?
Siifan;har’a gudarin jira jabaa maali nagumaa?
Jabeessaa:naguma siin arguun barbaadeni.
jabeessaa:nan dhufa na eegi daandii gubbaatti!
Siifan:tole,kottu bakka bashannaa fincaa’aa gudar karra durattin si eega.
Jabeessaan amboo geejjiba qabatee gara gudar qajeele.Akkuma isheen jette fincaa’aa gudar ga’ee yoo bu’u karra dura marga keessa teessee jirti.Waldubbisanii harka walqabatanii gara bakka bashannanaa sanatti olseenan.Siifan har’a oduu haaraa jabeessaatti gadi fuute.Keessoo isaatti rifataa walharkaa fuudhanii odeessaa deemu.
olseenanii erga xiqqoo deemanii siifan fuulleetti nyaara ija isheen namicha taa’ee jiru itti agarsiifte.Innis iji isaa irra bu’e.”maal inni?”jedhe jabeessaan…….
….torban itti fufa……..!!
← YEGINBOT POLETIKAA (የ ግ ን ቦ ት ፖ ለ ቲ ካ) -GADAA (TESFAY GEBREAB)-“OLF ምክር አይሰማም! ወያኔ ደግሞ እውር ነው!” አሉኝ።……!!
ILKAAN KEENYA AKKAMITTIIN RIGANNA LAATA? -AKKAMIIN FOOLII AFAANII BADAA (HALITOSIS) ITTISNA?- “FAYYAA TAPHA SEETEE …..!” *-Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsa Yonas. →